Tirada Ciidamada AMISOM looga dilay gudaha Soomaaliya oo la shaaciyay | Baydhabo Online
Tirada Ciidamada AMISOM looga dilay gudaha Soomaaliya oo la shaaciyay
Waxaa lasoo bandhigay Warbixin lagu shaacinayay tirada ciidamada howlgalka nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee AMISOM looga dilay gudaha Soomaaliya tan iyo markii ay soo galeen dalka Sanadkii 2007-dii.
Professor Paul Williams oo ah khabiir u dhashay dalka Mareykanka waxna ka dhiga Jaamacadda George Washington, ayaa baaritaano uu sameeyay kusoo bandhigay tirada ciidamada AMISOM looga dilay gudaha Soomaaliya.
Khabiirkan ayaa warbixinta uu soo saaray ku sheegay in ciidamada AMISOM intii u dhaxeysay bishii March 2007 illaa bishii December ee sanadkii hore 2018 laga dilay askar u dhaxeysa 1,483 askari illaa 1,884 askari.
Professor Williams ayaa sheegay inaysan suurtogal ahayn in lawada helo tirada rasmiga ee Askarta AMISOM ee geeriyooday, sababo la xiriirta dalalka ay Ciiddanka ka joogaan gudaha Somalia oo aan weli shaacinin Liiska Askartii looga dilay dagaaladii Alshabaab.
Waxa uu sidoo kale sheegay Khabiirkan Mareykanka u dhashay in aan xarumaha AMISOM ee Muqdisho lagu soo bandhigin Liiska iyo magacyada Ciiddankii loogu dilay howlgalka Soomaaliya, balse lagu muujiyey qoraal lagu xusay inay Saraakiisha raga iyo haweenka ee AMISOM iyo Ciidamada Qaranka ee naftooda ku waayay si nabad & Ammaan ugu soo dabaalaana dalka Soomaaliya.
Midowga Afrika Warbixin maaliyadeed uu soo saareen ayaa laga helay inta u dhaxeysa 2014 iyo 2018 waxay muujinayaan in Midowga Afrika ay bixisay lacag gaareysa 74.6 Milyan oo ah magdhawga Askarta la dilay.
Wadamada ciidamada ka joogaan Soomaaliya iyo Midowga Afrika ayaan si rasmi ah u shaacin tirada ciidamada uga geeriyooday howlgalka Soomaaliya, waxaana inta badan la qariyaa khasaaraha AMISOM kasoo gaara howlgalka ay Soomaaliya u joogaan.